Ny PM Israeliana teo aloha Netanyahu dia manana fandaharam-potoana miafina any Hawaii
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny PM Israeliana teo aloha Netanyahu dia manana fandaharam-potoana miafina any Hawaii
Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Lanai, fantatra ihany koa amin'ny hoe Pineapple Island of Hawaii, no toerana alehan'ireo miliardera sy olo-malaza mba hankafizany fiainana manokana sy rendrarendra. Ity lisitra ity dia misy mpiara-miasa amin'i Microsoft, Elton John, filoha ary maro hafa. Ankehitriny, ny praiminisitra teo aloha avy any Israel dia hita tany Lanai, saingy mety misy ny maro hafa amin'ny tantara - ny firaisana tsikombakomba?
Israel dia miteny amin'ny olom-pirenena tsy handeha any ivelany, fa ny praiminisitra israelianina teo aloha ary ny mpitarika ny mpanohitra ankehitriny, Benjamin Netanyahu, dia miala sasatra ao amin'ny Nosy Lanai any Hawaii ankehitriny.
Ny nosy Lanai dia an'i Larry Elisson, miliarda amerikanina jiosy ary tompona orinasa Internet Tech Oracle.
Larry Elisson dia vavolom-panenjehana ihany koa amin'ny fitsarana kolikoly nataon'i Benjamin Netanyahu ho avy ao Israel.
“Ao amin'ny F ahony fotoantsika Lanai, ary ny praiminisitra teo aloha Benjamin Netanyahu dia mijanona eto, miaraka amin'ny vondrona mpiambina Mossad », hoy ny hafatra nalefan'ny vahiny hotely androany.
Rehefa mandeha ny PM iray taloha, afaka mihevitra ve fa misy fandaharana miafina foana? Miaraka amin'ny praiminisitra israeliana teo aloha hita tany amin'ny nosy Lanai, mitady avana Hawaii ve ity fandaharam-potoana ity, na mety hihaona amin'ny vavolon'ny mpampanoa lalàna iray izay tokony hijoro ho vavolombelona amin'ny mpampanoa lalàna amin'ny fitsarana iray hatao amin'ny PM?
Tamin'io andro io ihany dia nisy fahafatesana iray hafa ary 763 fanampiny ny aretina COVID-19 voarakitra tao amin'ny State of Hawaii of Hawaii. Ny isa isa-nosy dia ahitana tranga vaovao 469 ao Oahu, 123 any Maui, 126 amin'ny Nosy Hawaii, 26 any Kauai, 5 any Molokai, 3 amin'ny Lanai, ary 11 ny mponin'i Hawaii voan'ny aretina ivelan'ny fanjakana.
Tamin'ny 16 Aogositra, ny mpitarika ny mpanohitra ankehitriny any Israel dia tazana nipetraka tamin'ny trolley aéroport tao amin'ny seranam-piaramanidina San Francisco miandry ny kitapony golf. Raha ny fahitana azy dia lavitra be avy tany Tel Aviv nankany amin'ny nosy Lanai any Hawaii izy, araka ny notaterin'ny The Times of Israel.
Ny fijanonana amin'ny Four Seasons of Lanai dia tsy lafo.
Ny efitrano fivarotana penthouse ao amin'ny Four Seasons Hotel Lanai dia mitentina US $ 21,000 isan'alina, manao azy ho suite lafo vidy indrindra any Hawaii. Ity nosy ity koa dia toeram-pilalaovana golf 2, ao anatin'izany ny Manele Golf Course. Tamin'ny taona 1994, ny mpiara-manorina an'i Microsoft Bill Gates dia nanambady tamin'ny lavaka faha-17 amin'ilay taranja.
Ny praiminisitra teo aloha dia nanitrikitrika fa mandoa dia any Lanai any Hawaii izy sy ny fianakaviany, ilay nosy fantatra fa mpampiantrano an'arivony tapitrisa sy miliardera rehefa mandeha ny fotoana.
Raha ny filazan'ny Times of Israel dia miala sasatra any Etazonia ny minisitry ny fitaterana na dia eo aza ny fitakian'ny governemanta amin'ny fitsangatsanganana any ivelany.
Na eo aza ny fiparitahan'ny firafitry ny Delta an'ny COVID-19, dia mandray mpitsidika vaovao 20-30,000 XNUMX i Hawaii isan'andro. Ny mpitsidika toy izany dia tonga avy any amin'ny toeran'i Etazonia ary mila mampiseho taratasy fanamarihana vaksinin'ny CDC navoakan'i Etazonia na mamokatra fanamarinana fanadinana PCR navoakan'i Etazonia.
Noho izany, ny mpitsidika dia mpizahatany any an-toerana na mponina monina an-tanindrazana.
Tsy mazava ny fomba mety nahavitan'ny PM teo aloha izany raha nanidina nankany Hawaii izy raha tsy nijanona tao San Francisco, araka ny nitaterana tamin'ny fampahalalam-baovao israeliana.
Ny nosy Lanai dia ao amin'ny County Maui ary mihoatra ny 98% dia tompon'ny Oracle Larry Ellison.
Ireo mpitsangatsangana nosy kely indrindra dia mety mitsidika any Hawaii, manolotra fandresen-dahatra lehibe ho an'ireo mpitsidika azy i Lanai.
Ho an'ny praiminisitra teo aloha dia mety hanao zavatra bebe kokoa izany - fihaonana amin'ny tompon'ilay nosy sy ny namany Larry Ellison. I Ellison koa dia vavolombelona amin'ny fitsapana kolikoly manandanja amin'ny PM teo aloha.
9 kilaometatra monja miala an'i Maui, nefa tontolo lavitra, Lanai dia afaka mahatsapa ho toerana 2. Ny voalohany dia hita ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy rendrarendra izay ahafahan'ny mpitsidika manaram-po amin'ny fanatanjahan-tena kilasy an'izao tontolo izao sy golf amin'ny hazakazaka. Ilay iray hafa kosa dia hita mibontsina eraky ny lalana miverin-dàlana amin'ny nosy amin'ny fiara mitondra kodiarana 4 hijerena ireo harena sarobidy eny an-dalambe. Ny fiadanam-po, ny fitsangatsanganana ary ny fiainana manokana dia mety ho hita ao amin'ireto 3 ireto faritra any Lanai.
Rehefa nahatratra ny COVID-19 dia nesorin'i Ellison ny hofan-trano any Lanai, ary tamin'ny taona 2018 dia nanangana orinasa Sensei izy izay manara-maso spa sy trano fandraisam-bahiny misy herin'ny masoandro.
Ellison dia nividy efa ho 98 isan-jaton'ny nosy tamin'ny 2012 tamin'ny vola mitentina 300 tapitrisa dolara amerikana; ny fividianany dia nahitana 87,000 (35,200 hektara) ny tany 90,000 36,400 hektara (XNUMX XNUMX hekitara) nosy.
Lanai, izay fonenan'ny mponina manodidina ny 3,200, no nosy kely indrindra misy mponina ao Hawaii ary trano amoron-dranomasina milamina, tany mikitoantoana, toeram-pialan-tsasatra ambony ary ny fironana maharitra an'i Ellison, izay tanterahiny amin'ny alàlan'ny orinasa fampandrosoana antsoina hoe Pulama Lanai.
Ilay nosy 141 kilaometatra toradroa, izay 365 kilaometatra miala ny morontsirak'i Maui, dia tsy misy jiro fifamoivoizana ary vitsy ny arabe voaravaka, hoy ny Forbes. Raha oharina amin'ireo nosy Hawaii hafa dia mitokana i Lanai - saingy manana drafitra hanova izany i Ellison. Te hamadika an'i Lanai ho toerana fizahan-tany izy.
Amin'izao fotoana izao, ny nosy dia misy trano fandraisam-bahiny 2 Four Seasons ary safidy safidy kely karazana B & B.
Any Israel, notsaraina i Netanyahu noho ny fiampangana hosoka sy fanitsakitsahana fitokisana tamina tranga telo samihafa, ary koa ny fanaovana kolikoly tamin'ny iray tamin'izy ireo. Laviny ny fanaovan-dratsy.
Ellison dia iray amin'ireo vavolon'ny fampanoavana an-jatony amin'ny fitsarana kolikoly an'i Netanyahu.
Ny anarany dia voalaza fa tamin'ny roa tamin'ireo tranga roa ireo ary ny tatitra iray tamin'ny herintaona dia nilaza fa nanohana sy nandresy lahatra ny mpifehy israeliana Arnon Milchan izy handatsaka ny mpisolovavany hahafahan'ny Netanyahu manakarama azy.
Nancy Borts hoy:
21 Aogositra 2021 amin'ny 14:45
Innuendo, tsipelina diso, fiampangana tsy voaporofo. Tsy milaza na aiza na aiza ilay lahatsoratra hoe Ellison (fa tsy Elisson)
dia teo amin'ny nosy, nihaona tamin'i Netanyahu na nandamina ny fijanonana tamin'ny mpiasan'i Ellison aza.
Hita miharihary ny fitongilan'ny mpanoratra. Tatitra tsy mitombina na mendri-kaja!